5 Ngwaọrụ dị egwu maka ndị na-ere ahịa ọdịnaya Minimalists | Martech Zone
A na m ewere onwe m dika onye pere mpe na ahia ahia. Achọghị m kalenda mgbagwoju anya, ndị na-ahazi oge na ngwaọrụ ndị na - eme atụmatụ — n’ebe m nọ, ha na-eme ka usoro a gbagwojuru anya karịa ka ọ dị. Ghara ikwu, ha na-eme ka ndị ahịa ọdịnaya ghara isi ike. Ọ bụrụ na ị na-eji ọnwa isii ọdịnaya kalenda atụmatụ ngwá ọrụ-na gị na ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ maka-ị na-eche gị ụgwọ rapaara niile nkọwa nke atụmatụ. Agbanyeghị, ndị na-ere ahịa ọdịnaya kacha mma dị agile, dị njikere ịgbanwe ọdịnaya dịka nhazi oge gbanwere, ihe na-ebilite ma ọ bụ arịrịọ ka emere.
Abụ m onye na-adịghị ike na onye na-arụ ọrụ na ọrụ m, yabụ ebe m ka na-adabere na ngwaọrụ ole na ole maka nyocha, ịhazi, idezi na ndị ọzọ, ha niile kwụ ọtọ ma nwekwaa onwe ha. Taa, a na m ekekọrịta ole na ole ọkacha mmasị m iji nyere gị aka belata ibu na mbọ ị na-agba n'ịzụ ahịa ọdịnaya.
Foto Foto X
Maka: Edezi foto na ingmepụta eserese
Ọ bụ ezie na ọ ga-adị mma ịmụ ma jiri ngwa ọrụ dịka Adobe Photoshop maka edezi foto, enweghị m oge iji mụta ya, ma ọ bụ ego iji kwụọ ya. Amalitere m iji Photoscape X (naanị maka Mac; gbaghara ndị ọrụ Windows) afọ ole na ole gara aga ma ugbu a dabere na ya maka edezi foto ma ọ bụ ihe eserese niile m na-eme, nke dị ọtụtụ.
Enwere m ike ịmezi ọkọlọtọ, gụnyere ịkpụ ihe, idozi agba na ndozi, yana imegharị. Ihe m ji ekpochapu foto maka otutu, bu ihe ndezi, ebe inwere ike itinye ederede, udi, agba na ihe ndi ozo. Nke a na-enye aka maka ịmepụta ihe mmekọrịta mmadụ na ibe ya, kamakwa maka ịgbakwunye akụ ma ọ bụ igbe na nseta ihuenyo (dị ka onyonyo dị na post a), nke dị mkpa mgbe ị na-ede akwụkwọ nkuzi ma ọ bụ na-arịọ mgbanwe imewe na ọdịnaya gị.
M na-eji Foto Eserese mee ihe mgbasa ozi mmekọrịta maka otu n'ime ndị ahịa m ma ị ga - ahụ ụfọdụ ngwaahịa gwụchara n'okpuru. (Cheta na: na collage nke foto na-mere na Photoscape!)
Nnukwu ngalaba ikike Checker Ngwá Ọrụ
Ọrụ m dị ka marketer ọdịnaya gụnyere nyochaa uru nke weebụsaịtị dị iche iche, yana otu n'ime usoro kachasị mkpa bụ Ngalaba Nchịkwa. Ezie na enwere ọtụtụ ngwa akwụ ụgwọ ị nwere ike iji, achọtala m nke kachasị mma, kachasị mfe ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya bụ ngwa ọrụ websaịtị a. Echiche dị mfe dịka ọ na-ada: ị idetuo na mado ndepụta nke weebụsaịtị, lelee igbe maka data ịchọrọ ka ọ chọta (Ngalaba Nchịkwa, Nchịkwa Peeji, Moz Rank, Adreesị IP), wee chere ka nsonaazụ ahụ jupụta. n'okpuru.
Nke a dị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme nyocha weebụsaịtị na nnukwu ọnụ ọgụgụ site na iji Google Sheets n'ihi na ị nwere ike idetuo na mado kpọmkwem site na mpempe akwụkwọ n'ime ngwa ọrụ ahụ. Enweghị usoro agbakwunyere, enweghị ịgbakwunye kọma-ịme ihe nwere ike ịbụ ọrụ na-agwụ ike, nke dị mfe ma dị mfe. Also chọghị otu akaụntụ, nke pụtara na ị nwere otu obere paswọọdụ iji cheta.
echekwa & Hootsuite
Maka: chedhazi usoro ihe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Achọrọ m ịgụnye ha abụọ n'ihi na m na-eji ha ugbu a wee hụ ha dịka ngwaahịa ndị nwere ike dị iche iche. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ akwụ ụgwọ dị, m ji ọtụtụ n'ime ha eme ihe, mana ọ bụrụ na ọ dị mfe, ngwaọrụ n'efu, ndị a bụ ọkacha mmasị m. Nke a bụ ihe masịrị m banyere nke ọ bụla:
usoro ihe omume: Ike Buffer maka ndị na-ere ahịa ọdịnaya bụ na ọ dị ọcha ma dịkwa mfe ịnyagharịa. Enweghị interface mgbagwoju anya, ị nwere ike ịhụ ihe a na-ahazi na nke ọwa na-enweghị ihe ọ bụla. Nchịkọta na ngwá ọrụ ha n'efu bụ ntakịrị, ma ọ ka bara uru.
All na-elekọta mmadụ: Hootsuite na-eje ozi dị ka ngwa mkpokọta zuru ezu na-enweghị oke. Akụkụ kachasị amasị m nke ngwá ọrụ a nwere ike ịgbakwunye iyi iji nyochaa maka mkparịta ụka, isiokwu dị iche iche ma ọ bụ ọbụlagodi ozi na akaụntụ ọ bụla. Ọ bụ ezie na ọ na-arụkwa ọrụ dịka usoro ihe omume na-arụ ọrụ dịka a tụrụ anya ya, akaụntụ efu enweghị ohere nyocha.
Maka: Ime atụmatụ
E nwere ọtụtụ atụmatụ na-eme ndepụta ngwa ọdịnala na ọ were m ọtụtụ afọ iji chọta onye na-na kpọmkwem ihe m na-achọ. Ihe ịma aka na listi ndepụta ngwa bụ otu ihe si dị mgbagwoju anya-ọtụtụ chọrọ ọrụ ọ bụla inwe ụbọchị ruru, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ jiri ihu mgbagwoju anya ebe a na-ahazi ọrụ gị n'ehihie, na-eme ka o sie ike ile izu gị dum anya n'otu oge.
TickTick bụ ihe niile m na-achọ na ndị ọzọ, na zuru oke maka ọdịnaya marketer na-ejikwa ọtụtụ akụkọ ma ọ bụ ndị ahịa. Nke a bụ ihe na - eme ka ọ zuo oke maka azụmaahịa ọdịnaya pere mpe:
Na Tabai Niile, ị ga-ahụ ọrụ maka ndị ahịa ọ bụla n'otu oge. Ọ bụla ahịa bi dị ka ha onwe ha “ndepụta,” nke bụ ihe ị na-ahụ n'okpuru:
I nwekwara ike lelee ndepụta ọ bụla iche iche, yabụ ka ị na-agagharị na ụbọchị ọrụ gị, ị nwere ike ilekwasị anya naanị otu onye ahịa, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịnọ na ọrụ ahụ na-enweghị uche.
Ọnụọgụ njirimara m na-achọ, agbanyeghị, enwere ike ịlele ọrụ na ndepụta ahụ. Site na TickTick, ihe ọ bụla enyochare ndepụta ahụ bi na ala, na-eme ka ọ dị mfe ịlaghachi na ndị nwere oke ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ma ọ bụ na-agbaso ihe ị mere ụbọchị ahụ.
I nwekwara ike iji nke a dị ka ngwa atụmatụ ọdịnaya, yana ndepụta kwa ọnwa na ọdịnaya ị na-eme atụmatụ ịmepụta. N'ihi na ị nwere ike itinye oge ruru, ndetu, ọkwa dị mkpa na igbe igbe n'ime mpaghara nkọwa ahụ, ị ​​nwere ike ịhazi nkọwa nke ọ bụla ngwa ngwa.
HARO na Nkọcha
Maka: urceschọta isi mmalite
Ọzọkwa, Achọrọ m ịgụnye ha n'ihi na ha na-arụ otu nzube - ma ha dị ezigbo iche n'otu oge. HARO (Nyere onye na-ede akụkọ aka) bụ obere ngwa ọrụ yana ọtụtụ ọrụ, mana ọ baara m ezigbo uru dị ka azụmaahịa ọdịnaya n'ihi na ọ dị mfe iji. Kwesighi ịmepụta akaụntụ ma ọ bụrụ na ịchọghị, na nzaghachi niile nke ajụjụ gị ga-abịa na igbe mbata gị - ebe ị nọrọla oge ka ukwuu. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchọta isi mmalite maka edemede, nke a bụ ụzọ iji mee ya.
Clearbit bụ ụzọ ọzọ iji chọta isi mmalite, mana m na-ejikwa ya iji jikọọ ndị nwe weebụsaịtị na ndị mbipụta ya. Ọ na-adị n’ime igbe mbata gị dị ka mgbakwunye, na-enye gị ohere ịchọ kọntaktị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ weebụsaịtị ọ bụla n’ime ya niile. Dịka onye na-azụ ahịa ọdịnaya ndị ọbịa na-eso na ndị editọ na ndị ahịa ọzọ na-ejikọ mgbe niile, ana m eji ngwá ọrụ a kwa ụbọchị.
Minimalist apụtaghị Uru
Kwesighi iji ihe mgbagwoju anya ma dị oke ọnụ naanị n'ihi na ha dị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike ịdị mkpa maka njikwa azụmaahịa ọdịnaya azụmaahịa, ọ bụrụ na ị dị ka m, na-ejikwa ndị ahịa pere mpe, ma ọ bụ na-arụ ọrụ naanị otu nzukọ, ndị a ga-abụ ihe niile ịchọrọ. Jikọta ha na Google Drive (Mpempe akwụkwọ na Docs), Gmail na ndị ọzọ, ị nwere ike ịhazi ma nwee ọganiihu na-efu efu na ngwakọta nke ngwaọrụ ndị gbagwojuru anya.
Tags: ntupoonnukwu ikike Checkerdoro anyaGmailGoogle mbanyeOkwute Googleihe ọsịseharohootsuitefoto edezifoto obulafoto xresearchrobin guptaisi mmaliteakọrọ
Jessica Thiefels na-ede ihe karịrị afọ 10 ma ugbu a ọ bụ onye edemede oge niile, onye ndụmọdụ gbasara ọdịnaya na onye nwe ụlọ ahịa. E gosiputara ya na Forbes na Business Insider ma dee maka Virgin, Manta, BPlans na ndị ọzọ.
A Bịara n'Ezi Oge Biputere na Atụmatụ Mgbasa Azụmaahịa Maka Hotels
Jessica, enwere m mmasị na njikwa ikike ị kwuru.
Kedu ihe ị na-eme mgbe ịnweta uru nke weebụsaịtị ma ọ bụrụ na ị chọghị ịkekọrịta?